Fitateram-bahoaka any Bali " Journey-Assist - Bus, Taxis, sns.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fitateram-bahoaka any Bali
Amin'ny ankapobeny, any Bali, ny fitateram-bahoaka dia zara raha marimarina ary tsy manana kalitao avo lenta. Tsy asiana lalamby any amin'ny nosy, misy fiara fitateram-bahoaka, taxi-be ary minibus.
(misimisy kokoa momba ny fitateram-bahoaka mankany Bali eto)
Matetika ny bisy dia tsy mahazo aina, fa ny saran-dalan'ny orinasa kely tsy dia malaza dia ambany 10 heny noho ny saran-dalan'ny orinasam-pitaterana bus Bali lehibe. Nuansa manan-danja - ny ankamaroan'ny bisy dia maraina ihany no mihazakazaka, noho izany dia tsy hivoaka foana ny tonga any amin'ny tanàna rehetra, mandeha ao aminy ary miverina amin'ny androny ihany.
Ny orinasam-pandeha malaza indrindra any Bali angamba Sarbagita... Manana zotra maromaro izy, ny tena malaza indrindra dia manomboka amin'ny seranam-piaramanidina Bali. Làlana iray hafa fangatahana fangatahana manomboka any Nusa Dua, mamaky an'i Jimbaran, seranam-piaramanidina, Kuta ary Sanur, ary mifarana any Batubulan (gara fitobiana). Ny saran-dalan'ny zotra farany dia Rs 3 any Indonezia, ary ny bus dia manomboka amin'ny 500:5 ka hatramin'ny 00:21. Ary ity orinasa ity dia manana ireto làlana manaraka ireto:
Seranam-piaramanidina - Tabanan (fiantsonan'ny bus ao Denpasar). Rupee Indoneziana 7 ny saran-dalana. Ny bisy dia mivezivezy 000 eo anelanelan'ny teboka fanombohana sy fiafaran'ny làlana.
Seranam-piaramanidina - Nusa Dua. 3 Rs ny saran-dalana.
Seranam-piaramanidina - Batubulan. 3 Rs ny saran-dalana.
Misy orinasa lehibe bus hafa, indrindra, Peramatour, izay mpizaha tany no tena jerena. Ny bisy an'ity orinasa ity dia mahazo aina, misy fika any anaty tranony. Ny fandaharam-potoana sy ny vidin'ny dia dia aseho ao amin'ny tranonkalan'ity orinasa ity - Peramatour.comamin'ny alalàn'ny famandrihana tapakila (tsy maintsy mamandrika farafahakeliny iray andro mialoha ianao). Amin'ny bus amin'ity orinasa ity dia afaka tonga amin'ny teboka maro ianao (saingy marihina fa indray mandeha isan'andro dia mihetsika ny hetsika): Sanur, Amed, Gili, Chandidas, Kuta, Ubud, Lovina, Senggigi, Nusa Penida, Padang Bay, Tulamben. Samy hafa ny saran-dàlana amin'ny zotra samihafa ary eo amin'ny manodidina ny 35… 000. Ny lafo indrindra dia ireo zotra izay ahitana, ankoatry ny fifamoivoizana aotobisy, serivisy ho an'ny nosy hafa any Indonezia.
fiara fitateram-bahoaka Kura2bus (Kuratubas na sekolim-pianarana) 🙂
mafy Kura2bus miasa any amin'ny faritra atsimon'i Bali. Manana zotram-bisy 8 izy. Miankina amin'ny làlana ny saran-dàlana ary 20 000 - 80 Rupee Indonezia. Amin'ny zotra sasany, ny bisy dia mandeha isaky ny antsasak'adiny hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, raha amin'ny lalana hafa kosa dia mandeha indroa isan'andro fotsiny ny bus. Noho io antony io dia tokony hanamarina mialoha ny fandaharam-potoana ao amin'ny tranonkalan'ity orinasa ity ianao.
Terminal Ubung - avy eto ny bus dia mihazakazaka hatrany amin'ny faritra avaratra sy andrefan'ny nosy: terminal Batubulan, Tanah Lot, Mengvi, Tabanan, Antosari, Lalang Liggah, Bedugul, Medevi, Negara, Gitgit, terminal Sukasada, terminal Gillimanuk (miakatra avy eo ny fantsona mankany amin'ilay nosy. Java).
Terminal Batubulan - misy bisy mihazona azy mankany amin'ny teboka toa an'i Sukawati, Mas, Ubud, Chandidasa, Gianiar, Klungkung, Bandli, Padang Bay (miala eto ny ferry mankany amin'ny nosy Gili sy Lombok), Amlapura, terminal Penarukan.
Terminal Tegal - manomboka eto ny bus dia mankany amin'ny teboka toy ny Terminal Ubung, Terminal Kereneng (any Denpasar), Kuta, Sanur, seranam-piaramanidina, Nusa Dua.
Bemo dia minibus kely. Ity dia minibus misy fahaizan'ny mpandeha 12. Ity karazana fitaterana ity dia tsy azo antsoina hoe mety. Ny hafainganam-pandehan'ny fiara dia ambany dia ambany, ny loto, ny vovoka, ny entana, ny fofon'ny solika sy ny tabataba no manjaka ao an-tranony. Fa mandritra ny fitsangatsanganana bemo dia azonao atao ny mahalala ny tsiro ao an-toerana, na izany aza, ankoatry ny hatsembohana sy havizanana. Endri-javatra iray hafa tsy mahafinaritra amin'ity fitaterana ity dia ny fijanonana matetika amin'ny fakana mpandeha isaky ny dingana.
Manana lalan-kaleha ny Bemos, saingy mety ho sarotra ny mahafantatra hoe iza no zotra minibus iray manaraka. Ny fivoahana sy ny fiakarana dia azo atao na aiza na aiza - amin'ny faritra rehetra amin'ny zotra. Mba hanaovana izany dia alefaso fotsiny ny tananao mba hahafantaran'ny mpamily fa te hiditra ao amin'ny bemo ianao. Ny saran-dàlana dia mitaky vola iray. Ny mponina eo an-toerana dia mandoa vola 4 eo ho eo amin'ny dia kely. Raha hitan'ny mpamily fa vahiny ny mpandeha iray dia matetika izy no manandrana mandoa vola bebe kokoa. Raha tsy te-hihoatra ny volan'ny manga ianao dia azonao atao ny manome azy mitovy amin'ny karama sy fialan-tsasatra avy any Bali. Nefa mila mitandrina ianao, satria indraindray ny mpamily Bemo dia maditra sy mahery setra.
(bebe kokoa momba ny sambo sy sambo eto Bali)
Any amin'ny nosy 18 no misy an'i Indonezia, ka tsy mahagaga raha mivoatra tsara ny fitaterana rano any Bali sy ny faritra hafa amin'ity firenena ity. Ny seranana lehibe indrindra any Bali dia i Benoa. Miala avy eo ny sambo sy ny sambo mankany amin'ny toerana samihafa amin'ity nosy ity ary mankany amin'ireo nosy hafa. Misy ihany koa ny seranana kely kokoa - Bay Bay.
Nosy Gili sy Lombok dia nosy akaikin'i Bali ary malaza amin'ny mpizahatany. Azonao atao ny manatona azy ireo amin'ny fividianana tapakila amin'ny tranokalan'ny orinasam-pitaterana eo an-toerana. Ny làlana mankany dia maharitra hatramin'ny 1,5 ora amin'ny sambo haingana na hatramin'ny 5 ora amin'ny sambo. Ho fanampin'ny hafainganam-pandeha ambany, ny ferry dia tena tsy mahazo aina, manana fofona sy maimbo izy ireo. Azonao atao ny mampiasa ny serivisin'ireto orinasa manaraka ireto:
Giligilifastboat - Manome dia an-tsambo mankany Lombok sy Gili.
Peramatour koa dia manolotra dia sy fitsangantsanganana mankany Lombok sy Gili. Azonao atao ny mitaingina sambo an'ity orinasa ity any Bali any Kuta, Ubud, Sanur, izay alehan'ny sambo mankany amin'ny seranan'i Padang Bay, ary avy eo mankany amin'ireo nosy hafa.
Blue Water Express dia orinasa iray izay mitondra anao any amin'ny toeran-kaleha toa an'i Gili Trawangan, Teluk Kode ary Gili Air. Misy ny famindrana avy any Kuta, Legian, Sanur, Denpasar, Seminyak, Nusa Dua, Jimbaran ary Ubud. Ny fandefasana sambo dia mety avy any Benoa sy Padang Bay.
Raha ny momba ny safidy eo amin'ny sambo sy sambo, dia tokony marihina fa miadana ny safidy voalohany. Ny fampiononana ao anaty seranana koa dia tsy ao tanteraka. Ny sambo dia mety sy haingana. Azonao atao koa ny mandamina fandaharam-potoana ho an'ny mpivarotra tsy miankina. Ho an'ny vola fanampiny dia afaka mitondra fiara na scooter ianao.
Taxi Blue Bird Taxi (Taxi-borona manga), taxi "bird blue"
Ny orinasam-piaramanidina tena mandroso sy be lalàna indrindra ao Bali dia ny Blue Bird Taxi. Solontena manerana an'i Indonezia ny orinasa ary ankehitriny dia manana fiara 23 izay miloko manga sy mitondra ny mariky ny Taksi eo an-tampontrano.
Ny mpamily Blue Bird dia manana fahazoan-dàlana mihantona ao amin'ny toerana iray mitanila. Ny mpamily fiarakaretsaka amin'ity orinasa ity dia manana endrika mendrika foana, ary maro amin'izy ireo no miteny anglisy farafaharatsiny amin'ny ambaratonga voalohany. Manao fanamiana manga (toa ny lokon'ny fiara) izy ireo.
Na izany aza, ny mpamily fiarakaretsaka (matetika tsy dia ara-dalàna) any Bali dia matetika no tsy manao ny marina. Betsaka ny manandram-bola amin'ny mpizahatany, mampiasa fomba isan-karazany. Indraindray misy mpamily fiarakaretsaka iray mitondra mpandeha iray mankany amin'ny toerana tsy fantatra, mangataka vola tsy ampy amin'ny saran-dalana. Ny sasany tsy mety mamadika ny mpifidy. Misy tranga ihany koa ny halatra ataon'ny mpizahatany ataon'ireo mpamily fiarakaretsaka, ka tsy mila miambina ianao ary tsy mitondra vola be miaraka aminao.
Ho fanampin'izay, ny mpamily fiarakaretsaka ao Bali dia matetika safidy, noho izany, raha amin'ny fotoana iray dia ilaina tokoa miaraka amin'ny antoka feno ny hivezivezena avy amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny vidiny izay tokony ho fantatra mazava mialoha, dia afaka manao famandrihana ho an'ny famindrana amina orinasa itokisana azo antoka ianao. Ny fifindrana toy izany dia hiaro anao amin'ny famonoana heloka bevava sy ny tsy fahatanterahan'ny mpamily fiarakaretsaka.
Taxi Moto ao Bali
Taxi Moto - Go-jek
Ny ampihim-pahefana amin'ity orinasa ity any Bali dia orinasa samihafa. Mitovy be amin'i Uber izany. Azo atao ny miantso taxi moto amin'ny alàlan'ny rindranasa finday. Ny tombony amin'ity karazana fitaterana ity dia ny tsy fisian'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ary ny saran-dalana somary ambany kokoa raha ampitahaina amin'ny taxi mahazatra. Ho an'ny dia mandeha irery any Bali, ity safidy ity dia tena mety.